Dowladda Ingriiska ayaa la sheegay in ay damacsan tahay inay yareyso kaalmada ay siiso… – Hagaag.com
Dowladda Ingriiska ayaa la sheegay in ay damacsan tahay inay yareyso kaalmada ay siiso…
Dukuminti sir ah oo la helay ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Ingiriiska ay damacsan tahay inay yareyso kaalmada ay siiso Suuriya iyo dalal badan oo Afrikaan ah in ka badan 60 boqolkiiba mustaqbalka, sababo la xiriira saameynta virus-ka Corona ee dhaqaalaha.
Dukumiintiga, oo ku taariikheysan bishii hore, oo markii ugu horreysay ay daabacday shabakadda Open Democracy, ayaa muujisay in saraakiisha Ingiriiska ay ka fiirsanayaan dhimista gargaarka Suuriya 67 boqolkiiba iyo Lubnaan 88 boqolkiiba.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in kaalmada la siiyo Nigeria laga yaabo inay hoos u dhacdo 58 boqolkiiba, Soomaaliya boqolkiiba 60, Koonfurta Suudaan 59 boqolkiiba, ugu dambeyntiina Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo 60 boqolkiiba.
Xafiiska arrimaha dibedda ee Ingiriiska oo faallo ka bixiyay ayaa sheegay in aan wax go’aanno ah weli la qaadan waxayna ku adkeysteen in Britain ay sii ahaan doonto deeq bixiyaha muhiimka ah ee gargaarka adduunka.
Suuriya ayaa waxaa halakeeyay dagaalo sokeeye ee ka qarxay kadib markii xukuumada Bashaar Al-Assad ay adeegsatay awood halis ah oo xad dhaaf ah si ay uga hortagto mudaaharaadka nabada ee dowlada looga soo horjeeday ee qarxay March 2011.